Data fails to conclude that Bitfinex shorts are depressing Bitcoin price - အကြွေစေ့ကိုကြည့်ပါ။ - CryptoCurrency နောက်ဆုံးသတင်းများ - နေ့စဉ် Bitcoin & Altcoin Buzz
PR ထုတ်ဝေမှုကို တင်ပြပါ။
အကြွေစေ့ကိုကြည့်ပါ။5လွန်ခဲ့သော ... လက အထူးပြောစရာမရှိ
Bitcoin price at Coinbase, USD (left) vs. Bitfinex BTC Margin Shorts (right). အရင်းအမြစ်: TradingView
Furthermore, the CME futures expiry occurred at3pm UTC, potentially involving 12.6k Bitcoin contracts worth $412 သန်း. However, there is no reason to believe that derivatives expiries directly relate to the Bitfinex margin short increase.
Bitcoin spot exchanges aggregate volume. အရင်းအမြစ်: Coinalyze
Such events may or may not result inaprofitable trade for bears, usually makingaheavy impression on traders. After all, not everyone has the margin required to short 22,000 Bitcoin, worth $726 သန်း.
The views and opinions expressed here are solely those of the author and do not necessarily reflect the views of Cointelegraph. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုတိုင်းတွင် စွန့်စားရမှုများ ပါဝင်သည်။. You should conduct your own research when makingadecision.
Adblock စမ်းသပ်မှု (အဘယ်ကြောင့်?)
အကြွေစေ့ကိုကြည့်ပါ။ ဒီဇင်ဘာ 31, 2020
အကြွေစေ့ကိုကြည့်ပါ။ စက်တင်ဘာ 10, 2021
အကြွေစေ့ကိုကြည့်ပါ။ စက်တင်ဘာ 9, 2021
အကြွေစေ့ကိုကြည့်ပါ။ သြဂုတ်လ 8, 2021
အကြွေစေ့ကိုကြည့်ပါ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 2021
အကြွေစေ့ကိုကြည့်ပါ။ ဇန်နဝါရီလ 14, 2021
ကျွန်ုပ်၏ အီးမေးလ်ကို သိမ်းဆည်းပြီး သတင်းလွှာကို လက်ခံရယူရန် အသုံးပြုခြင်းကို သဘောတူပါသည်။. (သင်သည် အချိန်မရွေး ထွက်နိုင်သည်။)
နိုဝင်ဘာလ 27, 2021
အောက်တိုဘာလ 29, 2021
အကြွေစေ့ကိုကြည့်ပါ။ - CryptoCurrency နောက်ဆုံးသတင်းများ - နေ့စဉ် Bitcoin & Altcoin Buzz မူပိုင်ခွင့် © 2021.
ရယူပါ။ 5% ပိတ်သည်။ ကုန်သွယ်မှုအခကြေးငွေနှင့် အတွေ့အကြုံအများဆုံး အဆင့်မြင့် Crypto Exchange!
FTX တွင် စာရင်းသွင်းပါ။